शरीरमा पानीको मात्रा कम हुँदा के के हुन्छ ? हेर्नुहोस् « Niatra TV
शरीरमा पानीको मात्रा कम हुँदा के के हुन्छ ? हेर्नुहोस्
काठमाण्डौं,असार २ । बैज्ञानिकहरु भन्छन्, ‘शरीरमा हुने पानीको मात्रा (६० प्रतिशत ) को केवल १.५ प्रतिशत कम हुँदा पनि शरीरमा सुख्खा हुने अर्थात ‘डिहाइड्रेसन’को असर देखा पर्न थाल्दछ ।’ ‘डिहाइड्रेसन’ धेरै कारणले हुने गर्दछ र तपाईँलाई तिर्खा लाग्नुको अलावा अरुपनि थुप्रै असर शरीरमा परिरहेको हुन्छ ।
आन्द्रामा पचेका खानाहरु पास हुन शरीरमा पानीको जरुरी हुन्छ । तपाईँले यदि कम पानी पिउनु भएको छ भने आन्द्रामा भएका बस्तुबाट पानी शरीरमा तानिन्छ र पचेको खानामा कडा हुन्छ । जसले गर्दा कब्जियत गराउँछ ।